Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Ololayaasha Warshadaha Hoteellada Mareykanka ee lagu buuxinayo 100,000 Shaqooyin Furan
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Si loogu dhiirrigeliyo shaqaale badan inay ku soo biiraan warshadaha, hudheeladu waxay siiyaan shaqaalaha mushahar badan oo tartan ah, jadwal dabacsan, iyo faa'iidooyin dheeraad ah, oo ay ku jiraan waqtiga fasaxa ee la bixinayo, dheefaha daryeelka caafimaadka, keydka hawlgabka iyo waxyaabo kale oo badan.
Olole xayaysiis cusub oo ka socda shan suuq oo hoteello waaweyn ayaa lagu dhawaaqay.
Hoteellada, gaar ahaan kuwa ku yaal suuqyada magaalooyinka, waxay leeyihiin waddo dheer oo aan dib ugu soo ceshano wixii naga lumay intii uu socday masiibada.
Huteeladu waxay u heellan yihiin soo jiidashada, xafidaadda, iyo waxbarista shaqsiyaadka shaqooyinka cimrigooda oo dhan ku jira beer koraya oo firfircoon.
Si looga caawiyo buuxinta kumanaan shaqooyin hudheel ah oo furan oo lala xiriiro faa'iidooyinka xirfad ee warshadaha hudheelka, maanta ayaa Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA) iyo cududdeeda sadaqad bixinta, American Hotel & Lodging Foundation (AHLA Foundation) ayaa ku dhawaaqday olole xayaysiis cusub shanta suuq ee hoteelada waaweyn.
Xayeysiinta cusub ayaa socon doonta illaa horraanta Ogosto barnaamijyada dhijitaalka ah, raadiyaha iyo daabacaadda suuqyada la xushay.
Dib u soo noqoshada safarka firaaqada, warshadaha hudheelku waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan kumanaan meelood oo furan si ay ula kulmaan kor u kaca baahida macaamiisha safarka. Si looga dhaadhiciyo shaqaale badan inay ku soo biiraan warshadaha, hudheeladu waxay siiyaan shaqaalaha mushahar badan oo tartan ah, jadwal dabacsan, iyo faa'iidooyin dheeraad ah, oo ay ku jiraan waqtiga fasaxa ee la bixinayo, faa'iidooyinka daryeelka caafimaadka, keydka hawlgabka iyo waxyaabo kale oo badan. Iyada oo leh jagooyin furan oo ku saabsan daryeelka guriga, maaraynta, cuntada iyo cabitaanka, adeegyada martida iyo waxyaabo kale oo badan, hudheeladu waxay sidoo kale bixiyaan xirfado la wareejin karo oo u oggolaanaya fursado shaqo adduunka oo dhan.
“Iyadoo ay taagan tahay xiisadii dhaqaale ee ugu xumeyd ee la diiwaan galiyo warshadeena, hoteelada hada waxaa soo food saartay arin si dhaqso leh u soo baxeysa oo ku saabsan shaqaale yaraan, gaar ahaan meelaha fasaxa loo tago. Huteeladuhu waxay ku dhexjiraan shaqaalaynta shaqaalaysiinta maadaama aan soo dhaweyneyno soo noqoshada safarleyda firaaqada ah, ololahanna wuxuu gacan ka geysan doonaa kor u qaadista wacyiga qaran ee ku saabsan jagooyinka furan iyo faa'iidooyinka xirfad ee martigelinta, ”ayuu yiri Chip Rogers, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda. AHLA. “Hoteellada, gaar ahaan kuwa ku yaal suuqyada magaalooyinka, waxay leeyihiin waddo dheer oo aan dib ugu soo ceshano wixii naga lumay intii uu socday musiibada. Hubinta inaan buuxin karno boosaska si aan ula kulanno kor u kaca dalabaadka martida waa tallaabo muhiim ah madaama aan ka shaqeyneyno soo kabasho buuxda. ”
“Hoteellada waxaa ka go’an inay soo jiitaan, xafidaan, oo ay waxbartaan shaqsiyaadka shaqooyinka cimrigooda oo dhan u koraya ee firfircoon. Dadku waa wadnaha martigelinta, waxayna AHLA Foundation ku faraxsan tahay inay ku dhisto dhaxalkeeda furitaanka albaabada fursadaha kuwa raadinaya inay raadsadaan shaqooyinka martigelinta, ”ayay tiri Rosanna Maietta, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee AHLA Foundation. "Kumanaan meelood oo hudheello furan ah oo waddanka oo dhan ah - laga bilaabo maaraynta illaa adeegyada martida - Hay'adda AHLA Foundation waxay bixisaa barnaamijyo ka caawiya kuwa hudheelka ah ee hadda jira iyo kuwa hadda jira inay helaan xirfado cusub oo ay ku gaaraan himilooyinkooda iyagoo abuuraya shaqooyin cimrigooda oo dhan ah.
Warshadaha hudheelku waxay bixiyaan 200 wadiiqooyin mihnadeed oo kala duwan oo leh xirfado wareejin kara oo u oggolaanaya shaqaalaha inay ka gudbaan jagooyinka dhammaan warshadaha hudheellada adduunka. Iyada oo loo marayo AHLA Foundation, hudheelka hudheelka iyo hoyga ayaa ka taageera shaqaalaha dhammaan heerarka shaqooyinkooda iyadoo la siinayo aqoon isweydaarsiyo horumarineed, tababar shaqo, iyo deeqo waxbarasho. Iyada oo boqolkiiba 80 ee shaqaalaha heer-galka ahi ay xaq u leeyihiin dalacsiin wax ka yar hal sano iyo boqolkiiba 50 ee maareeyayaasha guud ee hudheellada oo ka bilaabaya heerka heerka gelitaanka, hudheelka hudheelku wuxuu u abuuraa fursado badan dhaqdhaqaaqa sare.